ig – Health and Sports Supplements
Dianabol N’ihi Beginners Cycle Guide na bodybuilders
Dianabol bụ a eze steroid na e kere ihe dị ka afọ iri gasịrị Testosterone. Chọta German gbadaa-chemists, Dianabol mbụ e mepụtara ka a n'aka ha iji nye aka na ụfọdụ na-adakarị nsogbu, esịnede a ume ọhụrụ. Ọ na-e kwụsịrị na ojiji mgbe ike ike n'akụkụ metụtara mere ka ọ na-esi ike ruo ọtụtụ ahịa na-atachi obi. Taa, a Dianabol aga tinye n'ọrụ site na ọtụtụ ndị bodybuilders dị ka ụzọ iji nweta toned muscle ngwa ngwa nakwa dị ...
Ebe ịzụta Dianabol & Dbol mkpụrụ ọgwụ ahụ n’Ụzọ Iwu
Gịnị bụ Dianabol? Dianabol nwere ahia aha maka Methandrostenolone, na-emekarị kwuru na site a edebiri na aha - dbol. Ọ bụ ihe na anabolic steroid izizi na Germany tupu ya ufụn ebe ke American emepụta ọgwụ ibu, Ciba, na 1960. ...
Anadrol Legal Steroid Review & ebe ịzụta
Ekpughe Anadrol Anabolic Mgbakwunye Review - Ọ dị irè maka Bodybuilding? ...
Ebe ịzụta Trenbolone online
Trenbolone (C 18 H 22 0 2 ), mgbe kwuru na dị ka "Tren", bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ndị dị ike Steroid dị ka agba ndi egwuregwu na bodybuilders taa. Ọ bụ ezie na ọ bụ nke nwere ike, bodybuilders nwere ike iji ya n'enweghị mgbe kwesịrị doses na na nri Mmeju. Ọ bụ incredibly vasatail, kwa, dị ka ọ na-adaba n'ime ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke cycles n'ihi na ọnwụ ma ọ bụ bulking, ọ na abụọ ọma na ọtụtụ ndị ọzọ ogige. Ọ ...
Ịzụta Dianabol steroid Online: Dianabol – Buy Dianabol Online – DBol
Dianabol Dianabol (methandrostenolone, C 20 H 28 O 2 ), na-akpọkarị Dbol, bụ ntụgharị ọnụ anabolic steroid na awade oke uru na nnọọ obere oge. Ọ bụ nnọọ otu n'ime ọtụtụ nkịtị Steroid n'etiti anwụ-hard bodybuilders. N'adịghị ka ndị ọzọ Steroid, onye a bụ isi ntụgharị ọnụ ngwaahịa. N'ihi nke a, ndị na-ahọrọ na-ezere injections ruru ka nchegbu ma ọ bụ mgbaka nwere a dị ike ọzọ. ...